Hilqado Dhagta dhiiri galiyay Almond Tree ee ubaxu wuxuu sawiray Van Gogh. Cunnooyinka macaan ee laamaha waxaa soo saaray silsilado jilicsan oo nooca-birta ah oo ah, sida laamaha, dabaysha ula wareegaan. Noocyada kala duwan ee gemstones kala duwan, laga bilaabo cadaan ilaa casaan aad u daran, waxay matalaan hooska ubaxyada. Qeybta ubaxyada ubaxyada ah waxaa lagu matalaa dhagaxyo kala duwan. Waxay ka kooban tahay 18k dahab, dheemman casaan, morganites, sapphires casaan iyo roogayaal casaan leh. Dhamaaday oo la dhammaystiray Iftiin aad u sarreeya oo lehna qumman. Kani waa imaatinka gu'ga ee qaab jahan ah.
Axad 3 Bisha Todobaad 2022
Jimco 1 Bisha Todobaad 2022
Khamiis 30 Bisha Lixaad 2022
Arbaco 29 Bisha Lixaad 2022
Hilqado Boorsooyinka Gacanta Ururinta Dharka Dumarka Wakhtiga Loo Yaqaan 'timepiece' Ururinta Dharka Dumarka Giraantu